Waraaqda Hordhaca | RayHaber | raillynews
HomeWar saxaafadeedMaxay xayeesiinaysaa?Daabac Hordhac!
Qiimaha Xilliga xaadirka ah ee 2020 - Shirkadaha Turkiga
Waa isku darka xayeysiinta iyo macluumaadka. Qaabdhismeedka ereyga xayeysiinta waxaa laga soo qaatay isku darka ereyada “xayeysiinta” iyo tifaftiraha ial .. Markii aad sameyneyso xayeysiis xayeysiis ah alaabo ama adeeg, waxaa loogu talagalay in lagu gaarsiiyo macluumaadkan dhagaystayaasha bartilmaameedka ah. Maadaama aan ku jirno da'da internetka, xayeysiinta xayeysiinta ee xayeysiinta ah halkii xayeysiinta khayaaliga ah ay saameyn ku yeelan lahaayeen xayeysiistayaasha iyo bartilmaameedka dhegeystayaashaba. Sidaa daraadeed, heerka soo celinta xayeysiinta xayeysiinta ayaa aad u sarreysa.
Xayeysiinta / Xayeysiinta
Maya Nooca Xayeysiiska qoraal lacag
3.1 Maalin kasta (1 cutub) Qoraal, muuqaal iyo iskuxiran, Dofollow qoraal aan la isku halleyn karin £ 150
3.2 Toddobaadkiiba (3 walxood) Qoraal, muuqaal iyo iskuxiran, Dofollow qoraal aan la isku halleyn karin £ 400
3.3 Bil kasta (12 unug) Qoraal, muuqaal iyo iskuxiran, Dofollow qoraal aan la isku halleyn karin £ 1.500
Tusaalaha tusaalaha xayeysiinta Riix halkan!
Xaaladaha Loo Baahan Yahay
Xidhiidhada kujira qodobada xayeysiinta waa inay ahaadaan ugu badnaan 3.
5 sawir ama 1 fiidyow ayaa la aqbalaa.
Khamaarka, khamaarka, qodobbada xayeysiinta ee ka weyn da'da 18 lama aqbalayo.
Daabacaadda Warqad Cad
Hordhacaaga isgaarsiinta @rayhaber.com Waxaad ugu diri kartaa cinwaankayaga ama waxaad nagala soo xiriiri kartaa lambarka taleefanka ee hoosta ku yaal.
Kadib markii la daabaco waraaqda hordhaca, iskuxirka daabacaadan ayaa loo diraa macaamiisha. Isla maalintaas jeegga kadib, bixinta ayaa loo dallacayaa sida wareejinta bangiga ama bixinta PayPal.
Bixinta waxaa la helayaa xirmada toddobaadlaha iyo billaha ah kahor.
Dhab ahaantii 2020 News Advertising (Wargays) Qiimaha - Shirkadaha aan ahayn - Turkiga
Waa soo bandhigida macluumaadka iyada oo la xayeysiinayo. Qaab-dhismeedka ereyga xayeysiinta waxaa laga soo qaatay isku-darka ereyada "xayeysiis" iyo "tifatire". Intii lagu gudajiray xayeysiinta waxsoosaarka ama adeeg kasta, waxaa hadafkiisu yahay in lagu gaarsiiyo dhagaystayaasha bartilmaameedka leh macluumaadka. Maaddaama aan ku jirno da'da internetka, beddelka xayeysiinta xayeysiinta halkii laga xayeysiin lahaa khayaaliga ayaa saameyn ku leh xayeysiiyaasha iyo bartilmaameedsiga dhagaystayaasha inbadan. Sababtaas awgeed, heerka celinta xayeysiinta xayeysiinta ayaa aad u sarreysa.
Xayeysiinta Wararka / Daabacaadda
Maya Nooca Xayeysiiska Description Qiimaha (xayeysiiskiiba)
3.1 Maalin walba (1 magac) Qoraal, muuqaal iyo iskuxirid, Dofollow waligeed ma dhammaan 75 EUR
3.2 Toddobaadle (3 xayeysiis) Qoraal, muuqaal iyo iskuxirid, Dofollow waligeed ma dhammaan 200 EUR
3.3 Bil kasta (12 xayeysiis) Qoraal, muuqaal iyo iskuxirid, Dofollow waligeed ma dhammaan 750 EUR
Riix halkan tusaalayaasha!
VAT kuma jiraan.
Sharatanka, khamaarka, +18 waxyaabaha xayeysiinta ah lama aqbalayo.
Si Aad U Daabacdo
E-mayl ugu dir xayeysiintaada isgaarsiinta @rayhaber.com ama waad nala soo xiriiri kartaa.
Ka dib markii la daabaco xayeysiiska, iskuxirka daabacaadan ayaa loo diraa macaamiisha. Isla maalintaas jeegga kadib, bixinta ayaa loo dallacayaa sida wareejinta bangiga ama bixinta PayPal.
RAYİHALE Nidaamyada Xidhiidhka Caalamiga ah (WARARKA TIXRAACA)
Qodobka Xayeysiinta ee SEO RayHaber
Wasiirka Arslan ee "Central Corridor in Turkey la Central Diiwaanka" Qodobka Raillif in ...
Ogeysiiska Qandaraaska: Jidwad hooseeya oo ku xiran Xarunta Yazyhan
Polat Özbek oo ah qareen khibrad leh